Ministry of Hotels and Tourism meets with investors from local and international who proposed tender for hotels | Tourism Latest News
← Deputy Minister H.E U Htay Aung, Ministry of Hotels and Tourism, was met by Thailand Tourism authority, Vice Administrator International marketing (Asia and Pacific), Mr. SANSERN NGAORUNGSI and fellows
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင့်ဆန်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား →
Posted on August 14, 2012 by admin	Nay Pyi Taw, 14 Aung 2012
Ministry of Hotels and Tourism summonaproposal tender for Kyeik-Hto Hotel, Won Zin Hotel, Kalaw Hotel, Pin Ta Ya Hotel, Kaw Taung Hotel, LatKhotKone Hotels and Imperial Jade Hotel that expired contract. Nine Hotels, 30 company from local and international and 33 investors proposed tender.
U Than Win Maung, Myanmar Hotels and Tourism services( admin, budget, planning) and U Hla Htay, Managing Director of Myanmar Hotels and Tourism services give explanation about rules and regulation to whom proposed hotels, company and investors totally 134, today afternoon 12:30 PM, at Jade Hall, office No.33, Nay Pyi Taw.
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် အဆိုပြုတင်ဒါ တင်သွင်းထားသော ပြည်တွင်းပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံ
(နေပြည်တော်၊ သြဂုတ်လ- ၁၄ ရက်)
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှ ငှားရမ်းသက်တမ်းပြည့်ပြီးသည့် ကျိုက်ထို ဟိုတယ်၊ ၀န်ဇင်းဟိုတယ်၊ ကလောဟိုတယ်၊ ပင်းတယဟိုတယ်၊ ကော့သောင်းမိုတယ်၊ လက်ခုပ်ကုန်း ဟိုတယ်နှင့် Imperial Jade Hotel၊ စုစုပေါင်းဟိုတယ် (၆) လုံးတို့အား ဟိုတယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် အဆိုပြုတင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ ဟိုတယ် (၉) လုံး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီ (၃၀) ခုနှင့် လုပ်ငန်းရှင် (၃၃) ဦး တို့မှ အဆိုပြုတင်ဒါ တင်သွင်းခဲ့သည်။
အဆိုပြုတင်ဒါ တင်သွင်းသည့် ဟိုတယ်၊ ကုမ္ပဏီနှင့်လုပ်ငန်းရှင် စုစုပေါင်း (၁၃၄) ဦးတို့အား ယနေ့ နေ့လည် (၁၂း၃၀) နာရီအချိန်တွင် ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ နေပြည်တော် ကျောက်စိမ်းခန်းမ ၌ တွေ့ဆုံ၍ အဆိုပြုတင်ဒါအောင်မြင်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိမည့််သူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက် (၁၉)ချက်ကို မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးသန်းဝင်းမောင် (စီမံ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်း)မှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှဌေးမှ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.	← Deputy Minister H.E U Htay Aung, Ministry of Hotels and Tourism, was met by Thailand Tourism authority, Vice Administrator International marketing (Asia and Pacific), Mr. SANSERN NGAORUNGSI and fellows